Cameron.....: ပြင်ဦးလွင်သို့ (Day One)
elite ကားပေါ်က ခရီးဦးကြိုဆိုတဲ့ နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်
နိုဝင်ဘာလထဲမှာ စနေတနင်္ဂနွေပတ်တိုင်း မင်္ဂလာဆောင်တွေနဲ့အပြည့်ပဲ...။ တတိယပတ်လေးမှာပဲ လွတ်တာနဲ့ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲနဲ့ ပြင်ဦးလွင် ဒိုးပင်ပရဟိတကျောင်းမှာ မိဘမဲ့ကလေးတွေကိုလှူဖို့ ခရီးထွက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်...။ ဒီတစ်နှစ်လုံးကိုယ်ဘယ်မှခရီးမရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး ..။ မတ်လတုန်းက ပြည်ကိုဘုရားဖူးနေ့ချင်းပြန်သွားလိုက်တယ် ဒါလေးပဲ..။ ခုခရီးစဉ်က စလုံးက အလှူငွေတစ်ထောင်ရထားလို့ ကလေးတွေအတွက် လိုအပ်တာလေးတွေလှူဖို့တက်သွားကြတာပါ..။ elite ကားနဲ့ ညီအစ်မသုံးယောက်သွားခဲ့ကြတယ်..။ 8နာရီထွက်တဲ့ကားစီးကြတာ... ကားပေါ်ရောက်တော့ ခရီးသည်တွေကို နှင်းဆီပန်းတစ်ပွင့်ဆီစဝေပေးတယ်..။ မယူတဲ့သူများတယ် ပန်းကပြီးရင် ကြွေကုန်ရောတဲ့..။ ကိုယ်က ပန်းကြိုက်တဲ့သူမဟုတ်ပေမယ့်...ကိုယ့်အတွက် ခရီးဦးကြိုဆိုတဲ့ အထိမ်းအမှတ် ပန်းကလေးကို ယူထားလိုက်ပါတယ်..။ အ၀ါရောင်နှင်းဆီလေးတစ်ပွင့်...။ ပြီးတော့ မုန့်တစ်ဗူးရယ် ကော်ဖီတစ်ခွက်ရယ်ထပ်ပေးတယ်...။ အဲဒါတွေကိုတော့မစားဖြစ်တော့ဘူး...။ အိမ်ကနေ ထမင်းစားခဲ့ပြီကိုးး..။
နှင်းဆီဝါလေးကို ရေဗူးတွေနဲ့အတူ ခုံနောက်ကျောမှာထိုးစိုက် ကားစထွက်တော့ အက်လက်စ်သီချင်းလေးနဲ့ ငြိမ့်နေလို်က်တယ်...။ 115မိုင်က Feel စားသောက်ဆိုင်မရောက်ခင် ကျန်းမာရေးဆိုပြီး အပေါ့သွားဖို့ မီးရောင်မှိန်မှိန်အောက်မှာ ကျားမခွဲပြီး ဆောက်ထားတဲ့ အိမ်သာ...။ အထဲမှာ မီးမရှိဘူး လက်ဆေးတဲ့နေရာမှာပဲမီးတစ်ချောင်းတွေ့တယ်...။ အိမ်သာထဲဝင်တော့ မှောင်မှောင်မဲမဲ...။ အနံ့အသက်ဆိုးတယ် ကြမ်းပြင်မှာကလည်း ရေတွေနဲ့ မသန့်ရေးချာမသန့်...။ 115မိုင်မှာ နွားနို့တစ်ခွက်နဲ့ ပဲပလာတာမှာစားကြတယ် Feel ကအိမ်သာကတော့သန့်တယ်...။ ကားက Scania bus မို့ စီးရတာစိတ်ချရတယ်... ခပ်မှန်မှန်ပဲမောင်းပါတယ်..။ မိုးမလင်းခင် မိတ္ထီလာမှာတစ်ခါရပ်သေးတယ် ကိုယ်တွေက အိပ်ကောင်းတုန်းမို့ မဆင်းလဲရတယ်ဆိုတာနဲ့ ကားပေါ်မှာပဲနေလိုက်တယ်...။ မန်းကို မနက်အစော 5နာရီကားစိုက်တယ်...78လမ်း ဘူတာကြီးရှေ့မှာဆင်းပြီး ကိုယ်တည်းမယ့်နေရာကို ကားပြန်ငှားရတယ်..။ မန်းမှာက ရန်ကုန်လို တက္ကစီမရှိပါဘူး... နံပါတ်မဲကားတွေကိုပဲငှားစီးရတာ..။ ပြင်ဦးလွင်တက်ဖို့ ကားက မနက်ရှစ်နာရီမှချိန်းထားတာဆိုတော့ အဲမတိုင်ခင်ကို အဒေါ်တွေ ညီမတစ်ဝမ်းကွဲတွေနေတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရွာကို ကားငှားလိုက်ပါတယ်...။ အဒေါ်ရဲ့အိမ်မှာလည်း နောက်ထပ်အဒေါ်အငယ် မိသားစုနှစ်စုအလည်ရောက်နေပါတယ်...။ အဲဒါနဲ့ အကုန်ဆုံဖြစ်သွားတယ်...။ မနက်မိုးလင်းတော့ ပြင်ဦးလွင်မတက်ခင် ချင်းလုံမှာ ရှမ်းခေါက်ဆွဲဝင်စားကြတယ်...။
ဟုတ်ကဲ့ ရာသီဥတုလား... လုံးဝမအေးပါဘူး...။ ရန်ကုန်နဲ့အတူတူပါပဲ မန်းကလည်းပူပါတယ်...အနွေးထည်မလိုပါဘူး...။ ပြင်ဦးလွင်ကို ကိုယ်တို့က ငှားထားတဲ့ စူပါကာစတန်နဲ့ မောင်နှမတစ်ဝမ်းကွဲတွေအရင်တက်ကြတယ်...။ အဒေါ်တွေအဖွဲ့ကသူတို့ကားနဲ့ သပ်သပ်တက်ကြတယ်...။ ပြင်ဦးလွင်မရောက်ခင် ရတနာပုံမြို့သစ်မှာ အဒေါ်ကနားနေအ်ိမ်ဆောက်ထားတာ သိပ်မကြာသေးပါဘူး...။ အဲအိမ်ကြီးမှာ အားလုံးစုနေကြတယ်..။ ဟိုရောက်တော့ အ၀တ်တွေလည်း နေ့လည်စာစားသောက်ပြီးမှ အလှူပစ္စည်းထွက်ဝယ်ကြတယ်...။
အလှူကောက်လာတဲ့ငွေက မြန်မာငွေပြန်လဲတော့ 780000 ကျပ်ရတယ် ဆယ်သိန်းပြည့်အောင် ညီမတစ်ဝမ်းကွဲက သူ့အလှူအဖြစ်ဖြည့်လိုက်တယ်...။ ဆယ်သိန်းထဲကမှ ဆန်အိတ်နှစ်ဆယ်ဝယ်တယ် ကျန်တဲ့ငွေကို ကလေးတွေအတွက် အနွေးထည်ဝယ်လိုက်တယ်..။
ဇီယာတစ်အိတ်ကို 24000 ကျပ်တဲ့ ဆန်ဈေးတွေတက်နေတာလား... ရန်ကုန်မှာ အဲလောက်မရှိဘူးလားလို့...။ အရှေ့ဆုံးစည်ပိုင်းထဲက လုံးသွယ်မွှေးဆန်တဲ့ အစေ့လေးရှည်သွယ်သွယ်နဲ့ ကြည်ကြည်လေး ချက်လိုက်ရင် အဆီမရှိဘူး ဖွယ်ဖွယ်လေးဖြစ်တယ် ကျန်းမာရေးအတွက်တော့ကောင်းတယ်။
အဟီးးး...ဈေးရှေ့အ၀င်ပေါက်ဝမှာ အချဉ်ပေါင်းအသည်ကိုတွေ့တာ သရေတောင်ကျတယ်...။ အဲဒါအထဲမှာ ဆန်အိတ်မှာတုန်း ပြန်ထွက်လာပြီး ငါးရာဖိုးဝယ်စား လိုက်သေးတယ်...။ အောင်မလေး ဆွေမျိုးမေ့...။ ဇီးဖြူသီးသုပ်သုံးရာဖိုးနဲ့ အောက်က ဇောင်းလျားသီးနဲ့ဂွေးသီးကို နှစ်ရာဖိုးထည့်ခိုင်းလိုက်တယ်...။ မက်မန်းက အရောင်နဲ့မို့မယူတော့ဘူး..။
သစ်သီးတန်းများ သစ်သီးနံ့လေးမွှေးနေရော အရမ်းကိုလတ်ဆတ်လို့ထင်တယ် ရန်ကုန်မှာဆို အဲလိုအနံ့မရဘူး...
ပဲကြီးလှော်နဲ့ ပဲလုံးလှော် စားကောင်းချက်... တစ်ထောင်ဖိုးဝယ်စားလိုက်တယ်
၀က်မြေစာဥ တစ်ပြည်ကို 2500 တဲ့ တစ်ပြည်ဝယ်ခဲ့တယ် ..။ ဒီတိုင်းအစိမ်းစားလည်းကောင်းတယ် အချိုပွဲအနေနဲ့အခွံခွာပြီး ထန်းလျက်နဲ့ပြုတ်စားမလား ။ အသားနဲ့အသီးရွက်ထဲထည့်ကြော်မလား အရိုးနဲ့ဟင်းရည်ပြုတ်မလား အကုန်ကောင်း...။
ဆန်အိတ်ကို မနက်ဖန် ဒိုးပင်ကျောင်းကို ဆယ်နာရီခွဲအရောက်ပို့ပေးပါလို့မှာခဲ့ပြီး အမျိုးသားကန်တော်ကြီး ဥယျာဉ်ကိုဆက်သွားကြပါတယ်...။ သောကြာနေ့မို့ လူသိပ်မများပါဘူး...။ အေးအေးဆေးဆေး လမ်းလျှောက်လိုက် ဓါတ်ပုံရိုက်လိုက်နဲ့.. တံတားလေးကျော်ပြီး ကန်ရေပြင်တစ်ဖက်ခြမ်းက မြက်ခင်းကုန်းလေးပေါ်မှာ သွားထိုင်ကြတယ်...။ မေဘယ်လ်ပင်အောက်မှာပေါ့။
မေဘယ်လ်ရွက်ကြွေပင်အောက်မှာ နားနားနေနေထိုင်ကြရင်း ကောင်းကင်ပြာပြာက တိမ်စိုင်ဖွေးဖွေးအဆုပ်လိုက်တွေကို ကြည့်ရတာ သိပ်ကိုအေးချမ်းတာပဲ...။ စာအုပ်လေးပါ ယူသွားဖတ်လို့ကတော့ အောင်မလေး နိဗ္ဗာန်ဘုံပဲ...။
တစ်နာရီလောက်ထိုင်ပြီး တိရိစ္ဆာန်ဥယျာဉ်ထဲ (ငှက်ခြံထဲ)ကို အပျင်းပြေ၀င်ကြည့်လိုက်သေးတယ်
ဘုရားလေးရှိတဲ့ ကန်ဖက်က ရှုခင်း
ကန်တော်ကြီးကအပြန် ကလေးတွေအတွက် ဆွယ်တာဝင်ဝယ်တယ်...။ ကျန်တဲ့ပိုက်ဆံတွေနဲ့ အနွေးထည် အထည် 230 ရလိုက်တယ်...။
လှလိုက်တာ ဒါပေမယ့် ၀ယ်ပြီးဘယ်နားသွားဝတ်ရမလဲ...
တွေ့လား သူများတွေဘယ်လောက်ချမ်းတတ်လဲ အနွေးထည်တောင်မှ ကော်လံမှာအမွှေးတွေနဲ့ ကိုယ်ကတော့ ရင်ဖုံးလက်ပြတ်လေးနဲ့ အဲမြို့ကလူတွေက ကိုယ့်ကို လူထူးဆန်းလို ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ်...။ မသွားခင်ကတော့ တစ်ယောက်ကပြောတယ် 10ဒီဂရီပဲရှိတယ် ဟီတာတောင်ဖွင့်ရတယ်တဲ့...။ ကိုယ်လည်း အေးလည်းအေးပစေတော့ အနွေးထည်ကိုမသယ်တော့ဘူး ဟိုရောက်မှ ငှားဝတ်တော့မယ်ဆိုပြီး အနွေးထည်အပါးသုံးထည်ယူသွားတာ ၀တ်ကိုမ၀တ်လိုက်ရဘူး...နဲနဲစိမ့်လာရင် ပ၀ါလေးခြုံလိုက်ရင်ပဲ နွေးနေပြီ...။ ကားပေါ်မှာ ၀တ်ဖို့ ဂျာကင်အထူတစ်ထည်ကလည်း အိတ်ထဲမှာ ဒီတိုင်းလေး...။
နားမအေးအောင်ပိတ်တဲ့ အကုပ်ကလေး အရုပ်မျိုးစုံပုံရှိတယ် ချစ်စရာလေး
မြီးရှည်ထောင်းတဲ့ ယိုးဒယားသဘောင်္သီးထောင်းအရသာအတိုင်းပဲ သဘောင်္သီးနေရာမှာ မြီးရှည်မျှင်လေးတွေ ထည့်လိုက်တာ ကောင်းမှကောင်းပဲ ချဉ်ချဉ်စပ်စပ် ပုံကြည့်ပြီး ထပ်တောင်စားချင်လာတယ်။ မန်းက ညီမ၀မ်းကွဲလိုက်ပို့လို့စားရတာ ပြင်ဦးလွင်က အိမ်ဆိုင်လေးတစ်ဆိုင်ပဲ ဆိုင်နာမည်က ပင်လုံတဲ့...။
ဖက်ထုပ်အိုးကပ်ကြော်တစ်ပွဲက နဲနဲနောနော်မဟုတ်ဘူး အရမ်းစားကောင်းတယ်အထဲမှာ အရွက်နဲ့ပဲအစာထည့်ထားတာ..။ ကူးချိုင်နဲ့ကြက်ဥနဲ့ပဲ ...။
ဈေးဝယ်ပြီး အိမ်ပြန်လာတော့ ကောင်းကင်မှာ လသာနေပြီ...
ဒီလောက်လျှောက်စားပြီးတာတောင် အိမ်ပြန်ရောက်တော့ အဒေါ်ချက်ကျွေးတဲ့ ထမင်းဟင်းတွေကိုလည်း စားနိုင်ကြသေးတာ...လိုက်ပွဲတောင်ဆွဲလိုက်ရသေးတယ်...။ ထမင်းစားပြီးတော့ မေမြို့ဝိုင်သောက်ကြတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်က ပုံတွေတော်တော်များများရိုက်ခဲ့တယ် day2နဲ့ day3တင်ပြီးသွားရင် မိုးငွေ့ရဲ့ လက်စွမ်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Instagram နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလှလှလေးကို သီးသန့်ထပ်တင်ပါဦးမယ်...။
ပြင်ဦးလွင်ခရီးစဉ်လေးဟာ ထိုက်ထိုက်တန်တန်ပါပဲ မိုးငွေ့ရေ... ကုသိုလ်လဲရ ၀မ်းလည်းဝ စိတ်လည်းချမ်းသာရ။ တင်ထားတာလေးတွေလဲ စာဖတ်သူတို့အတွက် စုံစုံလင်လင်လေး ပြင်ဦးလွင်ကို အလည်တစ်ခေါက်လောက် ထပ်ရောက်ချင်ပါသေးတယ်။
20 November 2013 at 07:31
လှလိုက်တာ ဒါပေမယ့် ၀ယ်ပြီးဘယ်နားသွားဝတ်ရမလဲ...------မေ့တတ်လိုက်တာနော်ဒီကိုပို့လိုက်ပေါ့
လှလိုက်တာ. ..ပြင်ဦးလွင်ကို တစ်ခါမှ မရောက်ဖူးသေးဘူး..
အချိန်လဲရ အခါအခွင့်သင့်ရင် သွားမယ်..
21 November 2013 at 01:34
မရောက်ဖူးသေးပဲ ရောက်ဖူးချင်တဲ့မြို့ထဲမှာ မေမြို့လည်း အပါအဝင်မို့ မမိုးပုံလေးတွေကြည့်ပြီး ပီတိဖြစ်ရတယ်. ရောက်သွားရသလိုပါပဲလေ..
ကိုယ်၊ စိတ်၊ နှလုံး ချမ်းမြေ့ပါစေ..
22 November 2013 at 03:36